Dad dhigaayay Banaanbax looga horjeeday MD Farmaajo oo la xiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa saakay banaanbax aysan kasoo qeyb galin dad badan uu ka dhacay Laamiga Maka Al-mukarama gaar ahaan inta u dhaxeysa Isgoyska Dabka iyo Hotelka Wehliye ee Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka.
Banaanbaxan waxaa isugu soo baxay dad kasoo horjeeda Madaxweyne Farmaajo oo isugu jiray Haween iyo dhalinyaro kuwaa oo watay boorar ay kaga soo horjeedeen Madaxweyne Farmaajo iyo in doorashada dhaceysa la boobo.
Ciidamo katirsan Booliiska Soomaaliya oo goobta soo gaaray ayaa xoog ku kala eryaya dadkii banaan baxa dhigayay, waxa ayna ciidamada xireen sida aan wararka ku helnay qaar kamid ah dadkii banaan baxa dhigayay.
Dadkii banaanbaxa dhigayay oo u badnaa haween iyo dhalinyaro ayaa goobta ka cararay markii ciidamada bilaabeen in ay awood adeegsadaan ayna xir xiraan dadkii banaan baxa hor kacayay.